Group A ee Tartanka Euro 2020 oo caawa la soo gabagabeeyey… (Talyaaniga oo garaacay Wales & Xulka Switzerland oo ka adkaaday Turkey) – Gool FM
(Rome) 20 Juun 2021. Tartanka Euro 2020 Group-kiisa A ayaa caawa la soo gabagabeeyey iyadoo xulalka ay soo bexeen qaarkood, mid ka mid ah xulalkaasina uu isaga haray tartankan.
Haddii aynu ku horreyno kulankii dhexmaray xulalka Italy iyo Wales ayaa ku soo dhammaaday 1-0 oo uu ku adkaaday xulka qaranka Talyaaniga.
Goolka ay ku adkaadeen wiilasha Talyaaniga ayaa waxaa qeybtii hore u dhaliyey oo dhammaad ah 39’daqiiqo u dhaliyey Matteo Pessina, kaddib markii uu lugta la helay laad xor ah oo uu soo qaaday Marco Verratti, sidaas ayaana lagu kala nastay 1-0 oo lagu hoggaamiyey Wales.
Qeybtii labaad markii dib la isugu soo laabtay waxa ay xaaladdu ku sii adkaatay xulka Wales, kaddib markii uu kaarka cas ka qaatay 56’daqiiqo ciyaaryahankooda Ethan Ampadu.
Si kastaba ha noqotee, kulanka ayaa ku soo dilaaday 1-0 uu ku adkaaday xulka qaranka Talyaaniga oo kaalinta koowaad kaga soo baxay Guruubka A ee tartanka Euro 2020 markii uu wada badiyey dhammaan saddexdii kulan oo uu ciyaaray heerka guruubyada, isla markaana aan xitaa gool laga dhalin.
Dhinaca kale waxa uu kulan kale dhex maray xulalka Switzerland iyo Turkey, iyadoo Turkigu uu qaatay guuldarro kale oo xanuun badan kaddib markii lagu garaacay 3-1.
Labo gool oo ay kala dhaliyeen Haris Seferovic 6’daqiiqo iyo Xherdan Shaqiri 26’daqiiqo ayaa qeybta hore lagu kala nastay iyadoo 2-0 lagu horkacayey Turkiga.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta xulka Turkiga ayaa hal gool iska soo guday, waxaana 62’daqiiqo u dhaliyey Irfan Kahveci, kaasoo ciyaarta ka dhigay 2-1 kaddib caawin uu ka helay Hakan Calhanoglu.
Laakiin xulka Switzerland ayaa guushooda xaqiijistay kaddib markii uu markale shabaqa soo taabtay xiddiga kooxda Liverpool ee Xherdan Shaqiri, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 3-1 lagu garaacay Turkey.
Xulka Talyaaniga ayaa sagaal dhibcood kala yimid guruubka A oo guulo wada gaaray, waxaana kaalinta labaad ku soo baxay xulka Wales inkastoo ay min afar dhibcood wadaagaan Switzerland, haddana farqiga goolasha ayaa looga soo baxay Switzerland.